Ogaden News Agency (ONA) – Hooyo ay ka qaateen wiilkeedii yaraa ciidamada Itobiya oo soo gashay xerada Dhadhaab
Hooyo ay ka qaateen wiilkeedii yaraa ciidamada Itobiya oo soo gashay xerada Dhadhaab
Tan iyo intii uu wadanka Ogadenia gacanta ugalay gumaysiga madow ee Itoobiya waxaa soo baxayay dhibaatooyin aad ubadan oo ay shacabka Somalida Ogadenia ee birimagaydada ah ku samaynayeen.
Dhibaatooyinka ay ciidamada Itoobiya u gaysanayeen dadweynaha rayadka ah ayaa kala darajo hooseeyay wax aduunka kadhaca oo ayna samaynina majiro. Dhibaatooyinkaa badankii waxaa loo gaystay shacabkeena 10kii sano ee udanbaysay iyadoo ay jiraan dhibaatooyin waawayn oo xiliyo fog kadhacay dhulka Ogadenia.
Sikastaba ha ahaatee waxaa xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab soo gaadhay hooyo ree Ogadenya ah oo wiilkii ay ku curatay oo naaskeeda nuugahayay ay ciidamada Itoobiya ka qaateen xili ay doonayeen in ay iyadana xidhaan balse Allaah uu ka badbaadiyay iyada waxaase ay kala tageen ilmihii yaraa ee naaskeeda nuugayay.
Hadaba waxaan khadka telefoonka ee xerada ay kunooshahay kula xidhiidhay Maryan oo ah hooyada laqaatay wiilkeedii waxayna iisheegtay in ay mudo yar kusugan tahay xeryaha Dhadhaab islamarkaana ay kasoo qaxday Gobolka Doollo ee bariga Ogadenya. Gabadhan ayaa intaas kudartay in laxidhay kadibna uu Allaah S.W kasoo daayay dadkii ay u xidhnayd kadibna ay ciidamada Itoobiya isku dayeen in ay markale dib usoo qabtaan. Markaan arinkaas ogaaday baytidhi ayaan bilaabay in aan ka dhuunto ka dib waxay qaateen wiilkii aan dhalay oo reerka jooga oo ay islaan kale haysay wayna qaateen.
Maryan oo hadalkeeda siiwadata ayaa tidhi markaan arinkaas maqlay ayaan go’aansaday in aan wadanka iskaga tago. Maryan oo aan wax kawaydiinay meesha ay kaga warhayso wiilkeedii ayaa ku jawaabtay meel aan ku ogahay majiro waxaase igu maqaale ah in lagu hayo tuulada Yucub ee Gobolka Doollo.
Maryan oo hadalkeeda siiwadata ayaa tidhi waxaa naloo sheegay in ay dhaheen dadkii cunugan dhalay hayimaadaan markaas ayaa lasiidayne, waxayna sii raacisay in uu Allaah jiro oy tala saaratay, wax kale oo ay samayn kartana uusan jirin.
Sikastaba ha ahaatee Maryan waxay kamid tahay dhibanayaal aad u farabadan oo ku sugan gudaha iyo dibada Ogadenya oo ay dhibaato kasoo gaadhay ciidamada gumaysiga Itoobiya.